Faah-faahin cusub oo ku saabsan dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin cusub oo ku saabsan dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay...
Faah-faahin cusub oo ku saabsan dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan
Dagaal socda /Sawir hore/Keydka HQ
Hiiraan (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah kasoo baya dagaal culus oo Maanta Deegaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Hiiraan ku dhex-maray Ciidamo dadka deegaanka ah iyo Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid, sida la sheegay ,kadib markii ay Al-Shabaab weerar kusoo qaadeen deegaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Hiiraan,halkaas oo ay gacanta ku hayeen dad is aruursaday,kana soo horjeeda Maamulka Al-Shabaab,waxaana halkaasi kadhacay dagaal in ka badan hal saac socday.
Dadka deegaanka Ceel-Cadde ayaa goorsii horeysay waxaa ay sheegeen in dagaalkaas ay ku geeriyoodeen in ka badan laba ruux,isla markaana intii uu dagaalka socday ay la wareegeen deegaanka Ururka Al-Shabaab.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in gebi ahaan isgaariinta Magaalada la jaray aanan sirasmi ah loo ogaan karin xaalada ka jirta,sidoo kale Ciidamada deegaanka ay u baxeen deegaano dhaca duleedka Ceel-Cadde.
Dagaalka Maanta kadhacay deegaanka Ceel-cadde ee Gobolka Hiiraan weli kama hadlin Maamulka Gobolka Hiiraan iyo la wareegitaanka deegaankaas ee Al-Shabaab.
Dagaalka Deegaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Hiiraa
khasaare dhimasho iyo dhaawac